Ithegi: Iindawo zokuthengisa | Martech Zone
Maka: iindawo zeendaba
Olunjani uThengiso lwaBantu abaDibeneyo lweWebhu oluya kuluka
Andiqinisekanga ukuba uyibonile le vidiyo okwangoku. Akukhuselekanga emsebenzini kodwa kuyonwabisa kakhulu malunga nesihloko samaphephandaba amakhulu kunye neendaba zemveli zokupapasha ezijonge ukunyusa ingeniso ngokubonisa intengiso yemveli, ekwabizwa ngokuba ngumxholo oxhasiweyo. Yintoni iNtengiso yeNative? Intengiso yemveli yindlela yentengiso ekwi-intanethi apho umthengisi azama ukufumana ingqalelo ngokubonelela ngomxholo kwimeko yamava omsebenzisi. Iifomati zentengiso zemveli